Global Voices teny Malagasy » Kenya: Feno Fanantenana ireo Bilaogera amin’ny Fanelanelanan’i Kofi Annan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Janoary 2019 13:02 GMT 1	 · Mpanoratra Rebecca Wanjiku Nandika miora
Sokajy: Afrika Mainty, Kenyà, Ady & Fifandirana, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Vitsy ireo olona nanantena fandrosoana tanatin'ny fifampiraharahana rehefa nanolotra ny rotsankazon'ny fandriampahalemana ho an'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana taloha, Kofi Annan, ny Filoham-pirenen'i Ghana, John Kuffour. Iray volana lasa izany no niseho, rehefa avo dia avo ny maripana ara-politika no sady nandrahona ny hangotraka ka hipoaka ho ady an-trano. Natahotra ireo Keniana kanefa sady nanohy ny herisetra. Fifanipahan-javatra izany.
Saingy miaraka amin'ny iray volana nanolorantena tsy tapaka, miavao indray ny fahatokisana eo amin'ny hisian'ny fifanarahana maharitra eo amin'ny fandriampahalemana. Mitaratra anatin'ny tontolon'ny bilaogy ihany koa ity fahatokisana hita an-dàlamben'i Nairobi ity.
Mamintina ny fihetsehampon'ny maro momba an'i Annan malefaka i Where Madness Resides:
Amin'izao fotoana izao, tiako loatra i Annan hany ka manambana hivadika ho fanompoana izany. Tiako ny herimpony sy ny finiavany, ilay filazany hoe “Tsy vonona ny handinika ny fahavoazana aho. Tsy vonona ny hilavo lefona amin'izao.”
Tamin'ireo olona rehetra tafiditra tanatin'ity zotra ity, izy irery ihany no azoko nitokiana satria tsy tonga niaraka taminà fandaharam-potoana miafina marobe na ratsy nóho izany, nanambany tena ho saribakoly anatin'izao toedraharaha misy antsika izay noho ny “tombontsoa am-pelatànana.”
Izaho no vahoaka, ary tsapako ho toa mijery mihoatra ny tetidratsin'ny ankolafy roan'ilay fizarazaràna ara-politika i Annan, tsapako fa izaho no hitany, ary ampiasainy ho toy ny Avaratra tena izy aho, hizorany mankany amin'ilay Kenya Tokony ho Izy miala amin'ity toerana karankaina antsoina hoe Kenya Ankehitriny ity.
Miresaka momba ny fototra vaovao  iorenan'ireo fifampiraharahana ireo i Kumekucha:
Mialoha lavitra ireo mpitarika azy ny Keniana, ary tsy maintsy manararaotra ity toedraharaha ity hamolavolàna ny firenentsika araka izay itiavantsika azy isika. Tsy fankalazàna mialoha ny fotoana velively izany ho an'ireo mijery lavitra. Fotoana izao hametrahana ny fototry ny fitantanana orinasa ary handraràna ireo mpitondra mpamitaka sy tia tena – famelomana indray ny nofin'ny NARC.
Nitatitra ilay fandrosoana  i KenyaImagine:
Tanatinà valandresaka ho an'ny gazety, nilaza i Annan fa nanaiky ny hikaroka vahaolana hamaranana ny krizy misy ao Kenya ankehitriny ireo antoko mpiady. Nanohy ny teniny i Annan fa haseho vahoaka ny antsipirian'ity fifanarahana ity amin'ny herinandro ambony. Nanoro hevitra ny Filoha Kibaki hampiantso ny parlemanta faran'izay haingana ihany koa i Annan.
Niantso ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta mba hihaona amin'ireo mpikambana mpanelanelana ny roa tonta ny filoha Tanzaniana teo aloha, Benjamin Mkapa, izay isan'ireo mpanelanelana tarihan'i Annan.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/05/132675/
 Miresaka momba ny fototra vaovao: http://kumekucha.blogspot.com/2008/02/breakthrough-before-deadlock.html
 Nitatitra ilay fandrosoana: http://www.kenyaimagine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1132&Itemid=141